Fandotoana rano: inona izany, antony ary vokany | Green Renewable
Portillo Alemanina | 09/09/2021 08:59 | Tontolo_iainana
Ny rano no entam-barotra sarobidy indrindra eto an-tany. Na dia misy mineraly misy lanja ara-toekarena avo aza dia ilaina amin'ny fiainana sy ny fivoarany ny rano. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia mamaritra ny rano voaloto ho toy ny "ny fanovana izay novaina mba tsy hahafeno ny fepetra ampiasana azy amin'ny toetrany voajanahary." ny Fandotoana rano io dia iray amin'ireo olana goavana atrehan'ny zanak'olombelona.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny atao hoe fandotoana rano, inona ny mampiavaka azy ary ahoana no ahafahantsika misoroka izany.
1 Inona ny fahalotoan'ny rano
2 Antony fandotoana rano
3 Vokany amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana
4 Ahoana ny fomba hampihenana ny fandotoana rano
Inona ny fahalotoan'ny rano
Izy io dia ny fisian'ny akora simika na singa hafa lehibe kokoa noho ny an'ny toe-javatra voajanahary. Izany hoe, ny fisian'ny akora toy ny zavamiaina bitika, metaly mavesatra na sedimenta. Ireo loto ireo dia mampihena ny kalitaon'ny rano. Mba hiantohana ny fiarovana ny rano sy hiarovana ny fahasalamana, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanome tolo-kevitra amin'ny torolàlana momba ny kalitaon'ny rano fisotro:
Kalitao mikraoba. Mba hanamarinana izany dia hatao ny famakafakana mikrôbiolojika (fandinihana ireo zavamiaina bitika izay manondro fandotoana ny potika, toy ny fisian'ny E. coli na ny fitiliana ny hakitroky ny pathogen).
Kalitaon'ny simika. Ho fanamarinana azy, ny famakafakana dia ho entina hanaraha-maso ny fisian'ireo zavatra ampiana, izay avy amin'ny akora sy akora simika ampiasaina mba hahazoana sy fizarana rano.
Misy fiatraikany lehibe amin'ny fahalotoan'ny rano ny asan'ny olombelona. Ho hitantsika eto ambany ny antony lehibe.
Antony fandotoana rano
Amin'izao fotoana izao, olona manodidina ny 5 tapitrisa eto amin'izao tontolo izao no matin'ny rano fisotro maloto, toe-javatra iray tena lehibe eo amin'ny sehatry ny fanilihana ara-tsosialy, fahantrana ary fanilikilihana. Ireo no antony lehibe indrindra:
Fako indostrialy: indostria no iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fahalotoan'ny rano. Mampalahelo fa orinasa an'arivony maro no mbola tsy mahalala fa tsy tokony hampiasaina ara-dalàna io loharano io, ary mamoaka vokatra maloto be dia be avy amin'ny fizotran'ny indostrialy. Ny renirano sy ny lakandrano no tena iharan'izany fanao ratsy izany.
Fisondrotana ny mari-pana: Na dia mety tsy dia toa izany aza, misy fiatraikany amin'ny fandotoana rano koa ny fiakaran'ny maripana. Rehefa avo kokoa noho ny mahazatra ny mari-pana amin'ny tontolo iainana dia mampihena ny atin'ny ôksizena ny loharano, ka mahatonga ny fiovaovan'ny rano.
Fampiasana fanafody famonoana poizina misy poizina amin'ny fambolena: ny ankamaroan'ny fizotran'ny fambolena amin'izao fotoana izao dia mampiasa zezika sy akora simika ho an'ny fambolena sy ny famokarana sakafo. Eny, ireo vokatra ireo dia voasivana amin'ny alàlan'ny fantsona ambanin'ny tany ary, matetika, ireo fantsona ireo dia hiditra amin'ny tamba-jotra famatsian-drano hohanina. Saika tsy voatsabo mihitsy ity rano ity ary miverina amin'ny fantsona mety ho fanjifana.
Fandripahana ala: ny fitrandrahana tafahoatra dia mety hahatonga ny renirano, farihy ary loharano hafa ho maina. Ankoatr'izay, ny fandripahana ala dia tsy tafiditra amin'ny fanesorana ny faka faka ao amoron'ny renirano, izay mety hiteraka sediment sy bakteria hiseho ambanin'ny tany ary handoto io loharano sarobidy io.
Solika miteteAry farany, tsy tokony hohadinointsika ny fanao iray izay nateraky ny fomban-drazana ny fahalotoan'ny rano amin'ny faritra samihafa amin'ny tany: ny fiparitahan'ny solika sy ny vokatra avy aminy. Ireo famoahana ireo dia vokatry ny tsy fitateran'ny solika sy ny fivoahan'ny lasantsy ary ny vokatra hafa. Ireo vokatra ireo amin'ny ankapobeny dia voatahiry ao anaty tanky fitehirizana ambanin'ny tany; Amin'ny tranga maro dia hivoaka ny fitoeran-drano ary hisy zavatra hivoaka ao amin'ny vatana manodidina azy, ao anatin'izany ny loharano misy rano sahaza ny olombelona.
Vokany amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana
Misy vokany ratsy isan-karazany ateraky ny fandotoana rano erak'izao tontolo izao. Azontsika atao ny mizara ireo antony ireo amin'ny olombelona sy tontolo iainana. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo:
Aretina: Ny fisotroana rano maloto na fampiasana azy io ho an'ny fahadiovan'ny tena manokana sy ny fanadiovana ny tontolo iainana dia mifandray amin'ny aretina maro. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia miresaka momba ny fivalanana, ny kôlera, ny hépatite A, ny fivalanana, ny lefakozatra ary ny tazo typhoid. Ny fisorohana, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa famatsiana, ny fanadiovana ary ny fahadiovan'ny tena manokana, dia mampiroborobo ny fampiasana rano madio ho an'ny sakafo sy ny fahadiovan'ny ankohonana.
Fahafatesana: indrisy, ny rano maloto dia manana risika mifandraika bebe kokoa. Araka ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, dia miteraka fahafatesan'olona 1,5 tapitrisa isan-taona ny aretim-pivalanana. Anisan'izany, maherin'ny 840.000 no vokatry ny tsy fisian'ny rano madio sy ny tsy fahampian'ny fahadiovan'ny tena sy ny fanadiovana. Ny zavatra tsotra sy andavanandro toy ny fanasana tanana amin'ny savony sy rano na fisotro rano madio iray vera dia mety hisorohana ny fihanaky aretina mety hahafaty. Raha tsy misy rano, fahadiovana ary fidiovana, tandindomin-doza ny fahasalamana. 40% ny maty amin'ireo zaza tsy ampy taona dia vokatry ny fihinanana rano amin'ny tsy fahasalamana na tsy fahadiovana amin'ny toe-javatra maika.
Tsy fanjarian-tsakafo: ny tsy fanjarian-tsakafo dia mifandraika amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny areti-mifindra noho ny fifandraisana misy eo amin'ny sakafo, ny fahasalamana ary ny fikarakarana. Amin'izany fomba izany, ny sakafo mahasalama dia manome fahafaham-po ny filan'ny sakafo, nefa kosa mila tontolo iainana sahaza izay manome serivisy ara-pahasalamana, toeram-pidiovana ary fepetra fanadiovana sahaza ny rano fisotro.
Ecosystems: misy fiatraikany ratsy amin'ny rano madio amin'ny toe-javatra ratsy amin'ny tontolo iainana, satria misy fiantraikany amin'ny toeram-ponenana miteraka fahaverezan'ny biodiversité anaty rano izany ary manamora ny fivelaran'ny ahidrano na eutrofication manimba.
Ahoana ny fomba hampihenana ny fandotoana rano
Betsaka ny fahazarana sy fomba fanao tsara hanalana na hampihenana ny fahalotoan'ny rano:
Araho maso ireo vokatra fanadiovana ao an-trano: andramo ny mampiasa vokatra vokatra fanadiovana ao an-trano ary tsy mandoto loatra izy ireo.
Arotsaho amin'ny toerana sahaza azy ny reside tsirairay: ny fanodinana entana dia zavatra afaka mampihena ny fahalotoan'ny rano amin'ny alàlan'ny fako ao an-trano.
Safidio tsara ny fitafianao: mampiasa na mampiasa indray ireo izay tsy manimba tontolo iainana.
Mandraisa anjara: mandray anjara ny fampielezan-kevitra mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny tontolo iainana.
Azavao amin'ny zanakao lahy sy vavy hoe inona ny fahalotoan'ny ranomasina: lakilasy ny fanabeazana ny tontolo iainana mba hitehirizan'ny taranaka faramandimby ny tontolo iainana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fahalotoan'ny rano sy izay rehetra tafiditra ao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Fandotoana rano